Ciidanka Dowlada oo bur burin ku bilaabay dhul uu sheegtay in uu leeyahay Wiil uu dhalay Siyaad Barre - Awdinle Online
Ciidamada Dowladda eek u sugan degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa Maanta waxaa ay burburin ku bilaabeen Guryo ay degan yihiin dad Shacab ah oo ku yaalal degmada Afgooye, isla markaana dadkii deganaa la barakiciyay.
Guryaha la burburiyay ayaa waxaa ay ku yaallaan Xaafada Imbagaati ee kutaala degmada Afgooye, waxaana mas’uuliyadda dhulkaas hseegtay Wiil uu dhalay Madaxweyn ihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre.
Muuqaalo lasoo duubay ayaa laga arkayay dadka qaar oo caruurtooda guryaha kala soo baxaya iyo agabyo yar yar ee gacanta ku qaadaan karaan , waxaana guryaha lagu dhax bur burinayay alaabaha dadka qaar guryaha u yaalay.
Dadka Shacabka ah ee guryaha laga burburinayo ayaa degan mel u dhow Koontoroolka Baar Ismaaciil ee degmada Afgooye,waxaana qaarkood ay Warbaahinta u sheegeen in ay la yaaban yihiin dhibkaan loo geysanayo, isla markaana aysan heysan meel ay aadaan.
Ugu dambeyn waxaa ay ugu baqeen Madaxwyene Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble inay arrintaasi soo farageliyaan, isla markaana ay ka hortagaan dadka awooda dowladeed iyo midda qabiil Guryahooda uga saaraya.
Previous articleDaacish oo War kasoo saartay weerar ka dhacay Magaalada Muqdisho
Next articleFaah faahin: Dil ka dhacay Magaalada Kismaayo